चितवनमा मनाङलाई झापाले रोक्ला ? | Hamro Khelkud
चितवनमा मनाङलाई झापाले रोक्ला ?
चितवनमा जारी प्रथम इ प्लानेट जेसिज कप फुटबल प्रतियोगितामा आज लक्ष्मी हुण्डाई मनाङ मस्र्याङ्दी क्लब र रमपम झापा ११ आमने सामने हुँदैछन् । अघिल्लो वर्ष झापा गोल्डकपमा आफ्नै घरेलु मैदानमा मनाङसँग पराजित हुँदै उपाधि गुमाएको झापा त्यो हारको बदला लिने धुनमा रहने छ ।
मनाङ र झापाबीचको प्रतिस्पर्धा । फाइल तस्बिर
घरेलु फुटबलमा सफल क्लब मनाङ भने झापालाई हराउँदै यो सिजनको पहिलो उपाधि कब्जा गर्ने धुनमा रहने छ । आठ जना राष्ट्रिय टोली सदस्य र ३ जना यू २३ टोली रहेका खेलाडीलेसहित चितवन पुगेको मनाङलाई हराउन झापालाई निकै कठिन हुनेछ । तर कर्ण लिम्बु, योगेश गुरुङ र बुद्ध चेम्जोङ जस्ता खेलाडी रहेको जुझारु झापालाई हराउन मनाङलाई पनि सहज भने हुने छैन ।
अघिल्लो सिजनका खेललाई हेर्ने हो भने इतिहास मनाङको पक्षमा छ । दुहबी गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा मनाङले झापालाई २—० ले हराएको थियो । त्यस्तै मनाङले झापा गोल्ड कपको फाइनलमा आयोजक झापालाई उसकै घरेलु मैदानमा १—० ले हराउँदै उपाधि जितेको थियो ।
‘इतिहास निर्माण गर्ने विषय हो । झापा आफैँमा दरो टिम हो त्यसैले हामी सचेत भएर खेल्ने छौँ ,’ मनाङका प्रशिक्षक हेमन्त आले भन्छन्, ‘इतिहास मनाङकै पक्षमा भए पनि इतिहास उल्टन पनि सक्छ ।’ मनाङ आज पहिलो पल्ट सुरुवाती ११ मा विदेशी खेलाडीबिना मैदानमा उत्रने पनि आलेले बताए ।
इतिहास जे भए पनि इतिहासलाई बिर्सेर नयाँ इतिहास रच्ने उद्देश्यसहित मैदानमा उत्रने झापाका प्रशिक्षक भीम केसीले बताए । ‘मनाङ बलियो टोलीे, मनाङसँगको खेल सहज नभए पनि नतिजा आफूहरुतिर पार्ने प्रयास गर्नेछौँ,’ केसीले थपे,’हामी खेलको अन्तिम समयसम्म जितको लागि मैदानमा सङ्घर्ष गर्ने छौँ ।’
मनाङले गत बर्ष पोखराको आहा रारा गोल्ड कप, सुदुर पश्चिमको खप्तड गोल्डकप, झापाको झापा गोल्डकप र सर्लाहीको राजजनकश्री गोल्डकप सहित चारवटा उपाधि जितेको थियो । यता झापाले इलामको माइभ्याली गोल्डकप र विराटनगरको विराट गोल्डकप गरी दुईवटा उपाधि जितेको थियो ।
प्रथम ई(प्लानेट जेसिस कप फुटबल प्रतियोगितामा झापा ११ले अर्को ‘ए’डिभिजन क्लब हिमालय शेर्पालाइ हराएर आएको हो भने मनाङले सिधै बाइ पाएर क्वाटर फाइनल प्रवेश गरेको हो ।